Impikiswano ngokuphasiswa komthetho ovimbela ukuba kushaywe izingane | News24
Impikiswano ngokuphasiswa komthetho ovimbela ukuba kushaywe izingane
Johannesburg - Umthetho omusha okwenza kube yicala elibomvu eNingizimu Afrika ukushaywa kwezingane emakhaya, usuvuse inkulumompikiswano kuleli - okubalwa nezinhlangano zezenkolo - ezingahambisani nalo mthetho.
INkantolo eNkulu yaseSouth Gauteng ngoLwesine ikhiphe isinqumo sokuthi ukukhalima ingane ngokuyishaya kuphambene noMthethosisekelo wezwe.
Lo mthetho uvale intuba ebisetshenziswa ngabazali ekuqaleni uma beshaya izingane bethi bazifaka endleleni.
Abaningi basijabulele lesi sinqumo senkantolo bathi sivula ikhasi elisha ngamalungelo ezingane eNingizimu Afrika, okungelinye lamazwe ahamba phambili emhlabeni ngezibalo zokuhlukunyezwa kwezingane.
OLUNYE UDABA: Kulungile ukuqondisa ingane ngenduku -UPhapha
IChildren's Institute Out of Harm's Way yakhipha umbiko ngo-2016, owawuhlawumbisela ukuthi zibalelwa ku-34% izingane kuleli eziyizisulu zokunukubezwa ngokocansi kanye nokushaywa ngaphambi kokuhlanganisa iminyaka engu-18 yobudala.
UWessel van den Berg, omele amalungelo ezingane kanye nokukhuliswa kwabantwana ngendlela ngaphansi kwenhlangano iSonke Gender Justice, utshele i-eNCA ukuthi lesi sinqumo senkantolo sifike ngesikhathi esifanele.
"ISonke Gender Justice iyasamukela lesi sinqumo njengesibalulekile mayelana namalungelo ezingane kanye nokuvikela izigameko zodlame kuleli," kusho uVan den Berg.
Thola udaba oluphelele kwiHuffingtonPost.